Manomboka ny tsindrona maro – Zaza no iriako
Alahady 29 novembra 2015
Niverina ndray fa zay vao misy vaovao, ny vaovao moa dia oe manomboka tamin’ny 23 novembra teo ny “cycleko” .Efa eo ampanindron-tena aho nanomoka ny 24 novembra.
Ho fitiniko eto ambany ary reo zavatra hataoko mandrapahatonga ny andro faha-8.
Andro 1 : 23 novembra
Tonga ny 22 novembra ny fadimbolanako, dia niantso ny clinic aho ,hay moa ka ny 23 novembra no andro volohany satria ny atao eo andro volohany dia lay andro ifohazana aminy ra fa tsy ilay tasy.
Andro faha-2 : 24 novembra
Tsindrona Gonal F 125iu eo amin’ny kibo. Sambako nanindron-tena fa natahotra mafy ery aho,hay moa ka tsy maharary akoriny. Tena nanamora fitsondrona ilay fitaovana toy ny “pen” tsy heno mihitsiny fidiranilay fanjaitra manify eo aminy hodotra.Sady raha vao zoro 90 degre ihany no anondromana dia tsy maharary.Hatreto dia mbola tsisy fiatraika ivelany fa toy isanandro ihany fasalamako
Andro faha-3 : 25 Novembra
Tsindrona Gonal F 125 iu eo amin’ny kibo anelanelany 9 – 10 hariva
Azithromycin pilina anakiroa
Andro faha-4 : 26 Novembra
Tsindrona Gonal F 125iu eo amin’ny kibo anelanelany 9-10 hariva. Androny dia toa varina aho nony nanindrona hany ka lasa tsy mahazo zoro 90 degree ilay fanjaitra fa toa 70 degree,henoko nahary mihitsiny fidinanilay ranompanafody hang nisy ra kely refa vita. Nony marina ny andro dia mangana ilay faritra nisy ny tsindrona.
Andro faha-5 : 27 Novembra
Tsindrona Gonal F 125iu eo amin’ny kibo
Andro faha-6 : 28 Novembra
Tsindrona Orgalutran ny hariva anelanelany aminy 9-10 alina.
Andro volohany nampiasako ny Orgalutran androny,hita be samy hafa fiasany reo fanafody roa ireo. Na fanindronana azy samy hafa be satria lay Orgalutran dia tena seraingy be izao no sady lehibe fanjaitra raha mitaha amin’ilay Gonal F zay toa “pen” . Sarotra kokoa ny manindrona aminilay Orgalutran amin maha lebehibe anilay fanjaitra.
Andro faha-7 : 29 Novembra
Tsindrona orgalutran ny hariva anelanelany 9-10 alina
Zaho lasa hotrany te hatory be zany fona androny,sady kamo vavy be ngambany noho ilay Orgalutran, tsara ihany mba tsy kizitina.
Andro faha-8 : 30 Novembra
Fitilina ny ra sy scan. (Ho resahiko ao lahatsoratra manaraka eto )
Ireo aloha hatreto ny ataoko sy fanafody ato amiko,dia aorianan’io andro faha -8 no ahitana oe misy fiatraika amiko ve sa tsia reo fanafody reo, eo koa hahitana oe ina ndray ny dingana manaraka.
Isaorako aloha ny Tompo amin’ny nitantanany ahy ka tonga ihany ny andro hanombohako anity ,efa ela aho no miandry. Enganie mba ho tody tsy hisy olana (makaheritena be ery !😀)
Taloha aho no tena feno “stress” mihitsiny mieritreitra anity dianay ty fa tena nialako zany ,aleo tsy asiko stress tsy ataoko an-doha mihitsiny ,tsy oe tsy mivaky loha fa mandavitra ny “stress” . Refa anjarako io dia anjarako.
Misaotra anao mamaky,mialatsiny raha be menomeno ery ambony fa makaheritena e! Isaorako anareo rehetra hatrang aho ny mivavaka hoanay sy miresaka amiko ao msg voatokana Misaotra anao namaky koa. Mirary tontolon’andro mahafinaritra feno fahasoavana sy fitsikina. Reo ambany reo misy nalaiko
Gonal F sy Orgalutran
Tagged fiv, fiv malagasy, ivf, malagasy, zaza